Duqeyn Cusub oo ka dhacday Gobolka Jubbada Dhexe - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Duqeyn Cusub oo ka dhacday Gobolka Jubbada Dhexe
Mareykanka ayaa faah faahin waxaa uu ka bixiyey duqeyn dhinaca Cirka ah oo uu la beegsadey Saldhigyo Xubno ka tirsan Ururka dagaalamayaasha Al-Shabaab ku leeyihiin degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe.
War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in duqeyntaas laga fuliyey agagaarka degmada Jilib,isla markaana lala beegsaday Saldhigyo ay leeyihiin Al-Shabaab.
Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen Xubin ka tirsanaa Al-Shabaab,sidoo kalena ay ku taageerayeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab,sida uu sheegay kuxigeenka Agaasimaha howlgalada, Taliska Mareykanka ee Afrika Gen. Miguel Castellanos.
Sidoo kale waxaa Qoraalka Africom lagu sheegay in duqeyntaas qiimeyn ay sameeyeen aan wax khasaaro ah lagu gaarsiin dad Shacab ah balse lagu bur buriyey Saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab.
Previous articleKooxo qorsheynayay weerar oo Xabsiga la dhigay
Next articleHolwgal ka socda duleedka Magaalada Jowhar
Arsenal oo u kusoo baxday kaalinta koowaad ee saxiixa James Rodriguez
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqdo saxiixa ciyaaryahanka Real Madrid James Rodriguez xagaagan. Xiddiga reer Colombia ayaa si weyn la filayaa inuu uga...